उपत्यकामा संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघ्यो, ६ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी | Nagarik News - Nepal Republic Media
पछिल्ला दिनमा कोरोना सङ्क्रमण स्वास्थ्यकर्मीमा बढी देखिन थालेको छ।
यस क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा पनि अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीसँगै स्वास्थ्यकर्मीमा समेत सङ्क्रमण देखिन थालेको छ।
सङ्क्रमणको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण देखिन थालेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिए।
स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यकामा मात्र अहिलेसम्म ६ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण देखिएको छ।
उनले कोभिड–१९ अस्पताल, कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने, होम आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, कन्ट्र्याट ट्रेसिङमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमा बढी सङ्क्रमण भएको बताए। उपत्यकामा अहिलेसम्म १५ हजार १३८ जनालाई सङ्क्रमण भइसकेको छ। शुक्रबार मात्रै ८ सय ५९ जना सङ्क्रमित भएका थिए।
सबभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण देखिएको छ।
तीमध्ये २१ चिकित्सक, अधिकांश नर्स र वार्ड सहयोगी छन्। उनले सङ्क्रमितमध्ये धेरै निको भएर घर फर्किसकेको जानकारी दिए।
अहिले उक्त अस्पतालमा २७ जनामात्र स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यस्तै वीर अस्पतालमा ११५ जना स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण देखिएको छ।
वीरका कार्यकारी निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीका अनुसार तीमध्ये २५ चिकित्सक, ३५ नर्स र अन्य वार्ड तथा प्रशासनमा रहेका कर्मचारी छन्।
सङ्क्रमितमध्ये २५ प्रतिशत निको भएर काम गर्न आइसकेको उनले जानकारी दिए।
यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ८ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। तीमध्ये दुई चिकित्सक र अन्य नर्स छन्। अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले दुई चिकित्सक र एक नर्स निको भइसकेको र अन्य पाँच जना होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिए।
अहिले मुलुकभरि ६१ हजार ५९३ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने ४३ हजार ८२० जना सङ्क्रमण निको भएर घर फर्किसकेका र ३९० जनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७७ १५:४५ शनिबार